एकीकृत जनक्रान्तिलाई दुनियाका कुनै पनि नवफासीवादले रोक्न सक्ने छैन- प्रकाण्ड, प्रवक्ता– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी | Janakhabar
०	आज २५ औँ जनयुद्ध दिवस कसरी सम्झनुहुन्छ ?
नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा पहिलोपल्ट सामन्ती सत्ता र राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका विरुद्ध तत् समयको नेपाली श्रमजीवि जनताको आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रको मुक्ति, नेपाली भोका–नाङ्गा जनताको राज्यसत्ता र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित नेपाली जनताले बन्दुक पड्काएर महान् सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरेको ऐतिहासिक दिन २०५२ साल फागुन १ गते हो । विद्यमान राज्यसत्तालाई बल प्रयोग गरेर बदल्ने लक्ष्य राखेर सापेक्षितरुपले व्यवस्थित सुरुवात गरिएको नेपाली सशस्त्र क्रान्ति पनि हो । थालनी र बिकासको आफ्नो १० वर्षको जीवनमा नेपाली जनयुद्धले तीव्रता, भिषणता, व्यापकता, उच्चता र महानता अकल्पनीयरुपमा हासिल ग¥यो । इतिहासमा पहिलोपल्ट सामन्तवर्गको राज्यसत्ताका स्थानीय निकायहरुलाई ध्वस्त पारेर नेपाली जनताको जनसत्ताको स्थापना र अभ्यास भयो । मानव समाजको विकासक्रममा समाजवर्गमा विभाजित भई शोषकवर्ग सत्तासीन भएबाट शोषितवर्ग माथि बन्दुकको नालमा शासन गर्दै आएको विश्व समाज र त्यसको एउटा हिस्सा नेपाली समाजमा सामन्ती बन्दुकको शासनकाविरुद्ध नेपाली जनताको जनमुक्ति सेना र जनताको बन्दुक खडा गरेको गौरवपूर्ण दिन पनि हो । उत्पीडितवर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रिय एकता निर्माणको ऐतहासिक थालनीको दिन पनि हो । राष्ट्रवादी नेपालीलाई श्रमजीवि नेपाली जनतासँग राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा खडा गरी संघर्ष सञ्चालन गरिएको जनयुद्ध हो । २३८ वर्षे सामन्ती शासनको अन्त्य गरेको १० वर्षे जनयुद्ध हो । २०६३ देखि २०६८ सालसम्मको नयाँ राजनैतिक परिस्थिति खडा गर्ने नेतृत्व पनि नेपाली जनयुद्ध नै हो । २०६८ सालसम्म देशमा जुन राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन र नयाँ उपलब्धिहरु प्राप्त भए त्यसको प्रमुख कारक १० वर्षको जनयुद्ध हो ।
०	तपाईंहरुसंगै जनयुद्ध लडेका साथी सत्ता र सरकारमा छन्, तपाईंहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो सन्दर्भमा विगतमा जनयुद्ध लडेका मात्र होइन, त्यसको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र उनको समूह नै सत्ता र सरकारमा छ । अहिलेको प्रचण्ड, उनको समूह, सत्ता र व्यवस्था जनयुद्धको परिकल्पना र उद्देश्यको ठीक विपरीत छ । जनयुद्धको मान्यता र मालेमावादी विचार, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी नेतृत्व, सशस्त्र क्रान्ति, नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन, उत्पीडितवर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था र राष्ट्रिय मुक्ति हो । नेपालको अहिलेको सत्तासीनवर्ग त बुर्जुवा प्रतिक्रियावादबाट पनि पतित भएर दलाल पुँजीपतिवर्ग बन्न गएको छ । यो सत्ता असली दलाल पुँजीपतिवर्गको हो । व्यवस्था दलाल, संसदीय व्यवस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र त दलाल, पुँजीपतिवर्ग, त्यसको राज्यसत्ता र दलाल संसदीय व्यवस्थाको ‘रङरोगन’ मात्र हो, जसले जनतालाई ‘नयाँ परिस्थितिमा नयाँ भ्रम’ सिर्जना गरोस् । क्रान्तिले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिमा पुँजीपतिवर्गलाई मृत्युबाट बचाउन आइसियुको रुपमा प्रयोग गरिएको ‘ठर्रा रक्सीको निम्ति नयाँ बोतल’ मात्र हो । यसको नेतृत्वमा एमालेमा विलय भएर प्रचण्ड समूह पनि पुगेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजतन्त्रले बहुदलवादीहरुको लाज छोपिदिन राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भनिदिए जस्तो मात्र हो किनभने सत्ताको बागडोर राजाकै हातमा थियो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी, १० वर्षसम्म सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्ध, जनमुक्ति सेना, जनसत्ता, मालेमावादी विचार र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गरी राष्ट्रको स्वाधीनतालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यदिशाबाट विचलित भएका प्रचण्ड र उनको समूहको लाज छोप्ने’ रंग रोगन’ मात्र हो । सत्ता दलाल पुँजीपति बर्गको छ । ब्यवस्था संसदीय हो । प्रचण्ड र उनको समुह त्यसमा समाहित भएको मात्र हो । प्रचण्ड समूहको विभाजनता, आत्मसर्मपण र पतनका विरुद्ध भीषण संघर्षबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको नेतृत्व विकास भएको हो । हाम्रो पार्टीले १० वर्षको जनयुद्धको रक्षा र नेपालमा क्रान्तिको पूर्णताको उद्देश्यले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा विकास गरेर क्रान्ति सञ्चालन गरिराखेको छ । यसको राजनीतिक कार्यदिशा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । अहिलेको दुनियाँलाई उत्तर साम्राज्यवाद व्यवस्थाको विकल्पमा ‘साम्यवादी विश्व व्यवस्था’ दिने राजनैतिक लक्ष्य हो ।
०	अहिले विश्वपरिवेश हेर्दा तपाईंहरुले सोचेजस्तो एकीकृत जनक्रान्ति सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
अहिलेको विश्व विकसित र नयाँ ठाउँमा छ । शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्वव्यापी हैकम र दबदबा भएको विश्व नब्बेको दशकपछि र एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुको दशकको एकध्रुवीय विश्व छैन । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकको अन्त्यतिरबाट अमेरिकी साम्राज्यवादी एक ध्रुवीय विश्व उछिन्दै दुई ध्रुवतिर प्रवेश गरेको विश्व दोस्रो दशकको अन्त्यतिर आउँदा मूलभूतरुपमा बहुध्रुवीय विश्वमा बदलिएको छ । यो अहिलेको विश्वको बहुध्रुवीय चरित्र हो । अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध रसिया केन्द्रित, चीन केन्द्रित, मध्यपूर्व केन्द्रित, युरोपियन युनियन केन्द्रित र दक्षिण एसिया केन्द्रित ध्रुवहरु खडा भएका छन् भने थुप्रै उपकेन्द्रहरु पनि सतहमा आएका छन् । विश्वको अहिलेको बहुध्रुवीय विशेषताले साम्राज्यवाद राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, प्रविधि र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि विभक्त भएको पुष्टि गर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रतिध्रुवको अन्तरविरोध, सैन्य एवं व्यापार युद्ध र प्रतिद्वन्द्वितामा डरलाग्दो गरी फसेको छ । उसले चाहेर पनि त्यसबाट उक्सिन सक्दैन । अमेरिकी साम्राज्यवादले चाहे पनि विश्वमा उठेका घटनाहरुमा एक्लै फैसला गर्न सक्दैन । यसैलाई हाम्रो पार्टीले लेनिनले संश्लेषण गरेको साम्राज्यवादमा विकास भएर ‘उत्तर साम्राज्यवाद’ बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । उत्तर साम्राज्यवादी अहिलेको विश्वमा क्रान्तिको निम्ति विश्व परिवेश अनुकूल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ, एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकको विश्वको विशेषता भनेको “उत्तर साम्राज्यवाद र श्रमजीवि जनताको क्रान्तिको विश्व हो ।” यो महान् लेनिनले भन्नुभएको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको विश्वको विकसित र नयाँ आयाम हो । कुनै पनि समाज क्रान्तिबिना न अस्तित्वमा रहन सक्दछन् त बाँच्न सक्छ । पुरानोको अन्त्य र नयाँको सिर्जना गतिशील समाजको अनिवार्य नियम हो । नेपाली समाजको पछिल्लो कालखण्डको विकासक्रमलाई मात्र हे¥यौँ भने प्रमाणित हुन्छ, १०४ वर्षे राणा शासनका विरुद्ध क्रान्ति नभएको भए राणा शासन र राणाकालीन समाज व्यवस्था अन्त्य हुँदैनथ्यो । २००७ सालको परिवर्तन पनि हुँदैनथ्यो । ३० वर्ष पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्ध २०४६ सालका जनआन्दोलन नभएको भए नेपाली समाज सामन्तीबाट लोकतान्त्रिक यात्रामा पाइला चल्दैनथ्यो । १० वर्षको महान् जनयुद्ध नभएको भए सामन्ती प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका अन्त्य हुँदैनथ्यो । उता क्रान्ति समाजको गति र नयाँ जीवन हो ।
०	पार्टी पुनर्गठन भएको पनि छ वर्ष पूरा भइसकेको छ, तपाईंहरुले भने जस्तो क्रान्ति कहिले सम्पन्न हुन्छ ?
हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन गरेको गत मंसिरमा ५ वर्ष पूरा भएर छैठौँ वर्षमा प्रवेश ग-यो । पहिलो कुरा त कुनै पनि देश र त्यहाँका जनताको मुक्ति, स्वाधीनता र अधिकार सम्पन्न बनाउने अचुक हतियार भनेको क्रान्ति हो । देश र जनताको जीवनमा क्रान्ति हुने भनेको एउटा ठूलो राजनैतिक सवाल हो । यसका निम्ति देश र जनाताको हितमा राजनैतिक कार्य गर्ने सिद्धान्त भएको राजनीतिक प्रतिनिधि पार्टी हुनुपर्छ । अहिलेसम्म नेपाली जनताले दुःखको सामना गर्नुपरे र राष्ट्रले एकपछि अर्को घात बेहोर्नु पर्नाको मुख्य कारण नेपाली जनता र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नहुनु नै हो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा केही पार्टीहरुले प्रारम्भिक चरणमा देश र जनताको पक्षमा आपूmलाई खडा गर्ने प्रयास गरे पनि पछिल्ला दिनमा विचलित भए । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) यसको पछिल्लो जिउँदो उदाहरण हो । एउटा बडो खुसीको कुरा के छ भने आन्तरिक जीवन र बाह्य वस्तुस्थितिका भिषण प्रतिकूलताको सामना गरेर नेपाली जनता र हाम्रो देशले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र सच्चा राजनीतिक पार्टी पाएको छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो । हाम्रो पार्टी बनेदेखि एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गरिराखेको छ । पछिल्लो दिनमा केपी ओली सरकारको प्रतिबन्ध, हत्या, आतंक, गिरफ्तारी, झुठा मुद्दालगायतका सबै षड्यन्त्रका तानाबानासहित दमन गर्दा पनि हाम्रो पार्टी र क्रान्ति प्रभावशाली र शक्तिशाली बन्दै गएको छ । अझ यो तीव्रतामा बढ्दै जानेछ । यसलाई दुनियाँका कुनै पनि नवफासीवादले रोक्न सक्ने छैन ।
अहिले देशमा दलाल, पुँजीपतिवर्गको सामाजिक दलाल मुखुण्डो धारण गरेको केपी ओली सरकार र ओली–प्रचण्डको सरकारी नेकपाले कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादको रक्षा कवजमा मुक्तिकामी नेपाली जनता र सार्वभौम राष्ट्रका विरुद्ध नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निरंकुशतावादी र फासीवादीहरुलाई माथ गर्दै बेलगाम अपराध गरिराखेको छ । त्यसले एकीकृत जनक्रान्तिको सम्पन्नतालाई निकट तुल्याएको छ ।
०	पार्टीको आगामी रणनीतिबारे केही बताउन मिल्छ ?
०	तपाईंले भनेजस्तो नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव छ भनेर जनतालाई कसरी आश्वास्त पार्नुहुन्छ ?
०	सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दुहाई दिँदै एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघात गर्दै गइरहेको छ, यसमा पार्टीको धारणा के छ ?
०	भारतीय अतिक्रमण, एमसीसी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्ता विषयले राष्ट्र र जनताको शिर निहुराएको छ, यसमा पार्टीले के सोचेको छ ?
नेपाली समाजका क्रान्तिकारी र प्रगतिशील क्षेत्रका विरुद्ध केपी ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर फासीवादी दमन गरिराखेको बेला क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकले देश र जनता, क्रान्ति र परिवर्तनको पक्षमा आपूmलाई निर्भयताका साथ खडा गरेर अविरल रुपमा समाचार प्रवाह गरिराखेको सुखद अवसरमा क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै आगामी दिनमा पत्रिकाको गुणात्मक प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।